Somaliland Oo Dacwad ka Gudbisay Madaxda Laanta Afsomaliga Ee Idaacada BBC-da | Awdalmedia.com
Somaliland Oo Dacwad ka Gudbisay Madaxda Laanta Afsomaliga Ee Idaacada BBC-da
Xukuumadda Somaliland ayaa maanta waraaq askhato ah oo ka dhan ah dhexdhexaadnimo la’aanta laanta afsoomaaliga ee BBC-da u gudbisay madaxda sare ee idaacadaasi.
Wasiirka Warfaafinta, dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Md. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faarax [Guri-barwaaqo], ayaa qoraal dacwad ah gaadhsiiyey madaxa idaacadda BBC-da ee Afrika Salomon Mugera oo fadhigiisu yahay London iyo Carolina Korbia oo joogta Nairobi.
Xukuumaddu waxay si fiiro leh u qodobbeysay sida laanta afsoomaaliga ee BBC-du ay ula qabsatay dhexdhexaadnimo la’aanta iyo dheeli-tir la’aanta, mar kasta oo ay qabanayso doodaha iyo barnaamijyada lagu falanqeynayo arrimaha ku wajahan Somaliland iyo Soomaaliya.
Qoraalka wasiirka warfaafinta waxa lagu iftiimiyey in laanta afsoomaaliga ee BBC-du ay si xad dhaaf ah u buun-buuniso dhacdooyin aan macno lahayn oo laga soo diro Soomaaliya, halka ay indhaha ka qarsatay warar waaweyn oo ka dhacay Somaliland.
BBC-du may faafin socdaaladii madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi ku tagay dalalka Jabuuti iyo Itoobiya.
Waxa kaloo qoraalkaas lagu xusay in doodii u dambaysayee BBC-du qabatay 9-kii bishan March, ay u muuqatay mid ka baxday gacantii daadihiyii hagayey, waxaanu xubnihii u hadlayey Soomaaliya uu mar kasta siinayey wakhti ku dhow saddex ilaa shan daqiiqo oo aanu fursad u siinin ciddii u hadlaysay Somaliland.
Waxa kale oo xukuumaddu tusaale u soo qaadatay in weriyihii dooda hoggaaminayey uu Xildhibaan Sakariye Maxamuud oo ka socday Soomaaliya u fasaxay inuu dhabqiyo oo ma jaro-habaabiyo dullucdii doodda laga lahaa, waxaanu si badheedh ah ugu qaylinayey masuulkii Somaliland ku matalayey dooddaas.
wasiirka warfaafinta ahna afhayeenka xukuumaddu wuxuu qoraalkiisa ku soo gunaanaday inaanu ka fursanaynin inuu qaado tallaabo ku habboon haddii aanay madaxda BBC-du xadgudbyada uu qoraalka ku soo bandhigay aanay ka bixin jawaab maan-gal ah sida ugu dhakhsaha badan.